Chikonzero nei WWE yakanzura Brock Lesnar vs. Bobby Lashley - Mishumo - Wwe
WWE Champion Bobby Lashley anga achishevedzera kutarisana naBrock Lesnar kwenguva yakati wandei ikozvino. Lashley anonzi akavimbiswa mutambo neChikara mushure mekudzoka kuWWE makore mashoma apfuura, asi haisati yazadzikiswa.
Panguva Wrestling Mucherechedzi Radio , Dave Meltzer akabvunzwa nezve mikana yaBrock Lesnar yekudzoka kuWrestleMania 37 panguva yemutambo weWWE Championship pakati paDrew McIntyre naLashley.
ane makore mangani marla gibbs
Bobby Lashley munguva pfupi yapfuura akataura kufarira kutarisana neLesnar kuWrestleMania. Nekudaro, sekureva kwemishumo yazvino, Lesnar haazovapo gore rino, uye Lashley achaisa zita rake pamutsara achipesana neakapesana akasiyana panzvimbo.
Zvinoenderana naMeltzer chirevo , WWE akaronga mutambo pakati paBrock Lesnar naBobby Lashley asi haana kuzombosvika kwariri kunyangwe kambani yaive nemukana wekuita kuti zviitike.
Iwe unoziva pakapinda Bobby Lashley akaudzwa kuti aizotora Brock uye aive makore apfuura, uye hazvina kuzomboitika. Ivo havana kumbosvika kwariri. Hazvirevi kuti ivo vaisakwanisa kuzviita, ivo havana kumbosvika kwazviri.
Asingasviki mavhiki mashanu kuenda.
Ndiani achapinda munzvimbo inoonekera?
Vane Simba Vese vachange vakamirira. #WrestleMania pic.twitter.com/QDlUSSKdc9
- Bobby Lashley (@fightbobby) Kurume 9, 2021
Brock Lesnar haasi mukwikwidzi anoshanda muWWE izvozvi, zvinoreva kuti hazvigoneke kuti mutambo uchaitika chero nguva munguva pfupi. Lashley akataura zvakare nezve kutora Chipuka uye Drew McIntyre mumutambo weTriple Threat, asi mikana yezvinoitika yakatetepa.
Bobby Lashley achasangana naDrew McIntyre kuWWE WrestleMania 37
Drew McIntyre achatsvaga kutsiva paanopesana naBobby Lashley weMuvhuro Husiku RAW zita repamusoro kuWrestleMania. Iye weScotland Warrior akarasikirwa neWWE Championship kuThe Miz kuKubvisa Chamber mushure mekurwiswa naLashley.
kuziva sei kana musikana achikufarira
Inguva yakanakisa yegore ... Tune-up pa #WWEFastlane wobva wadzorera zita rangu ku #WrestleMania pic.twitter.com/AgUORrV69Z
- Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) Kurume 16, 2021
Nhengo yeHurumende yeHurumende yakaenderera mberi ichiwana mukwikwidzi kubva kuMiz pamuvara mutsvuku masvondo mashoma apfuura. Kana McIntyre akakwanisa kutora zita racho, ichave iri nguva inofadza kwazvo kwaari nekuti zvichaitika pamberi pemapoka evanhu.
McIntyre asati apinda mumugwagwa unoenda kuWrestleMania, zvakadaro, anofanirwa kupfuura neCeltic Warrior Sheamus kuWWE Fastlane.
sei john cena akasiya wwe
ndinofunga ndinofarira musikana uyu
zviitiko zvinonakidza zvevanhu vasina shamwari
mabhora makuru ekadhi remoto
wwe hapana tsitsi 2016 zuva